SAWIRO: Turkiga oo Qalab casri ah keenay Dekadda Muqdisho & dhaqaalihii ugu badnaa oo ay sanadkaan 2018ka helayaan. – Xeernews24
SAWIRO: Turkiga oo Qalab casri ah keenay Dekadda Muqdisho & dhaqaalihii ugu badnaa oo ay sanadkaan 2018ka helayaan.
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta daah furay qalab casri ah oo saaraya Maraakiibtii waa hora ku bur buray Biyaha Badda iyo qashinka ku dhex jira.
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay iney ku faraxsan yihiin in maanta ay daah furaan qalabka caro saarka iyo qashin saarka Dekadda Muqdisho,taasoo suurta gal ka dhiganeysa in Maraakiib fara badan oo xamuulkooda culus yahay ay ku soo xidhaan Dekadda.
Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Maryan Aweys Jaamac,ayaa tilmaantay in hadda ay gacanta ku hayaan nidaamkii lagu maamuli lahaa maaliyadda iyo qaabkii loo jiheynaa Maraakiibta Dekadda ku soo xidha.
Qalabkaan ayaa ah mid muhiim ah gaar ah uleh Dekadda Muqdisho,taasi oo Maraakiibta Xamuulka ah ay ku soo xidhan karaan,islamarkaana dakhli xoogan ka soo xaroon doonaan sida ay mas’uuliyiinta Dowladda sheegeen.
Ugu danbeyn, waxaa halkaasi ka hadlay Mareeyaha Dekadda ee Shirkadda Albeyrak ayaa sheegay iney bilaabi doonaan nidaamka caro saarka ee Dekadda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/01/Turkiga-iyo-dekada-Muqdisho.jpg 720 1080 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-01 12:29:292018-01-01 12:29:29SAWIRO: Turkiga oo Qalab casri ah keenay Dekadda Muqdisho & dhaqaalihii ugu badnaa oo ay sanadkaan 2018ka helayaan.
War Farxad leh oo Sitti naga soo Gaadhay. SOMALILAND SIDEE AYAY U MAAMULAN KARTAA HAWADEEDA?. CABBDILAAHI AXMED CAARS...